Arakan Eagle: June 2011
After 2006 Burmese Naval Bases and Army Camps in Arakan State.
Posted by Eagle info dash at 12:11 No comments:
Before 1988 Naval Base in Arakan State.
Posted by Eagle info dash at 12:09 No comments:
4.6 viss Golden Buddha Statue Found in Arakan's Ancient City
Mrauk U: An ancient golden statue of the Buddha weighing 4.64 viss was found at an ancient pagoda that was being excavated recently for restoration in Mrauk U, the ancient city of Arakan in western Burma, reportedatrustee of the pagoda and retired deputy director of the culture department.
They said the statue was found along with 26 other statues around 4:30 pm on 30 May, 2011, during excavations at Lokmezu Stupa of Ratana Theinkha Pagoda in Mrauk U.
"The statue is made of pure gold, is one foot high, and weighs about 4.64 viss. It was found together with 26 other statues during excavations of Lokamezu Stupa of Ratana Theinkha Pagoda for repairs," said U Kyaw Tun Aung,aretired deputy director of Burma's culture department.
The source added that the statue is now being kept in the Mrauk U government bank by the cultural department for security, because the statue is very valuable.
It was also said the statue was found to be made of gold after testing by the department in the presence of U Aung Than Tin, minister of culture for the Arakan State government.
"It is true that the statue was found while digging at the pagoda for repairs. It was found inabox together with other statues enshrined at the pagoda. It was also the largest of the statues and was found to be made of pure gold when tested in the presence of the culture minister," he said.
A pagoda trustee said the residents of Mrauk U are now concerned the statue will be taken to mainland Burma or elsewhere and won't be kept in its native place.
"Most of the local devotees want the statues to be re-enshrined in the former pagoda. If the gold statue, because of its value, is not kept at the underground shrine, it should be kept inashrine built with good security in the same area. The devotees here are worried now that the statue will be moved to mainland Burma or other places because of its value," said the trustee.
Source By: Narinjara News.
Posted by Eagle info dash at 11:22 No comments:
ရခိုင်က ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် နေပြည်တော်မရွှေ့ရေး ဆန္ဒပြ
ဒေသခံ ၅၀၀၀ လောက်က နေပြည်တော်ကို မရွှေ့ဖို့ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့မှာ တူးဖေါ်ရရှိ ခဲ့တဲ့ ရွှေ ဘုရားဆင်းထုတော် တစ်ဆူကို နေပြည်တော် ရွှေ့ဖို့စီစဉ်တာကို ထောင်နဲ့ချီ တဲ့ ဒေသခံတွေက ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဆင်းတုတော်ကို မြောက်ဦးမြို့မှာပဲ ထားဖို့ အာဏာပိုင်တွေက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရ ပါတယ်။
ရွှေအလေးချိန် ၄ ပိဿာ ၆၄ ကျပ်သားရှိတဲ့ ဒီဆင်းတုတော်ကို လောကမဉ္စူ ရှေးဟောင်း စေတီတော်ကို ပြုပြင်ရာကနေ တခြား ဘုရား ဆင်းတုတော် ၂၆ ဆူနဲ့အတူ မေလ ၃၀ ရက် နေ့က တူးဖေါ်တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆင်းထုတော်ကို တူးဖေါ်ရရှိတာနဲ့ ချက်ချင်း ရွှေဆင်းထုတော် ဆိုတာကို မသိခဲ့ ပေမယ့် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့မှာ ပြည်နယ် ယဉ်ကျေးမူ ဝန်ကြီး ရောက်လာပြီးမှ ပန်းထိမ်ဆရာတွေနဲ့ စစ်ဆေးတဲ့ အခါ ရွှေဆင်းထုတော် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ နေပြည်တော် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနက ဒီဆင်းထုတော်ကို နေပြည်တော်ကို ရွှေ့ပြောင်းဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ စနေနေ့မှာတော့ ရွေ့ပြောင်းဖို့ လုပ်ရာမှာ မြို့သူ မြို့သားတွက ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက် ကြတဲ့ အတွက် နေပြည်တော်ကို ယူဆောင်မယ့် အစီအစဉ် ပျက်သွားပြီး ဆင်းထုတော်ကို မြောက်ဦးမြို့မှာဘဲ ထားရှိသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘုရားကို နေပြည်တော် ယူမယ့် အစီအစဉ် ပျက်သွားတဲ့ အတွက် မြောက်ဦးဒေသခံတွေ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခု တူးဖေါ်ရရှိခဲ့တဲ့ ဘုရားဟာ မြောက်ဦးမြို့ မြောက်ဘက် ၂ ဖါလုံအကွာမှာ ဗောဓိရွှေဂူ တောင်တန်းမှာ တည်ရှိတဲ့ မန္တလေး ဒေါက်တာ သိန်းထွန်းတို့ မိသားစုက ပြုပြင်နေတဲ့ လောကမဉ္စူ စေတီဌာပနာတိုက်က ရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားဟာ အေဒီ (၈) ရာစု အစောပိုင်းမှာ ထုလုပ်တဲ့ ဘုရား ဖြစ်ပြီး ေသာလီ ခေတ်ကနေ မြောက်ဦးခေတ်ကို ပြောင်းရွှေ့ ယူပြီး ကိုးကွယ်ခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ရှေးဟောင်း သုတေသန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း ဦးကျော်ထွန်းအောင်က ပြောပါတယ်။
အခု အဲဒီ ဘုရားဆင်းထုတော်ကို မြောက်ဦးမြို့က ရတနာမာန်အောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ထားရှိသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အများပြည်သူတွေ ဖူးမျှော်နိုင်အောင် ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ကာ ပူဇော်ကိုးကွယ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဘုရားဂေါပက လူကြီးတွက ပြောပါတယ်။
Posted by Eagle info dash at 09:05 No comments:
ဖာ္ေတြေအဒီ ၈ ရာစုခန္႔က ေရႊအတိ ဆင္းတုေတာ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ တူးေ႔ရွိ
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွာ ေရႊအတိနဲ႔ သြန္းေလာင္းထားတဲ့ ေရွးေဟာင္းဘုရား ရုပ္ထုတဆူကို ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔က တူးေဖာ္ ေတြ႔ရွိတယ္လုိ႔ သတင္း ရရွိပါတယ္။
(Photo: Jmhullot/ WikiMedia)
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေလးမ်က္ႏွာဘုရား အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ မင္းေနျပည္ေတာ္ေဟာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေရွးေဟာင္း ဘုရားႏွင့္ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံု မ်ားစြာ တည္ရွိေနပါသည္။ (Photo: Jmhullot/ WikiMedia)
အဲဒီဘုရားကို ေလာကမဥၥဴ ေရွးေဟာင္းဘုရားလို႔ ေခၚဆိုၿပီး ေအဒီ ၈ ရာစုေလာက္က လက္ရာလို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဘုရားရုပ္ထုေတာ္ရဲ႕ ဥာဏ္ေတာ္ဟာ ၁ဝ လက္မ ရွိၿပီး ေရႊအေလးခ်ိန္ ၄ ပိႆာနဲ႔ ၆၄ က်ပ္သား ရွိတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ထြန္းသာ က RFA ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။
“ပိႆာ အႀကီးနဲ႔ ခ်ိန္ထားတာ ျဖစ္လုိ႔။ ကိုယ့္ေဒသက ပိႆာနဲ႔ဆိုရင္ ၅ ပိႆာေက်ာ္ ရွိတယ္။ ဒီဘုရားကို ေနျပည္ေတာ္အထိ ယူမယ္ဆုိၿပီး အမိန္႔နဲ႔ လာၾကတယ္။ လာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ၿမိဳ႕က ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဒါေတြကို သိပ္သေဘာမက်လုိ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဖုန္းဆက္တယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖုန္းဆက္လုိက္တဲ့အခါ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ တနာရီေလာက္အၾကာမွာ ဒီဘုရားကို ေနျပည္ေတာ္ကို မပင့္ေတာ့ဘူး၊ ေျမာက္ဦးမွာပဲ ထားလုိက္ပါ ဆုိၿပီး အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ေျမာက္ဦးမွာပဲ ကိန္းဝပ္ စံပယ္ေတာ္မူမွာ ျဖစ္ပါတယ္”
အဲဒီေန႔က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွာ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့တဲ့ ေရွးေဟာင္းဘုရား ရုပ္ထု စုစုေပါင္း ၃၇ ဆူ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီထဲမွာ အခုလို ေရႊအတိနဲ႔ သြန္းထုထားတဲ့ ဘုရားတဆူ ပါလာတာလုိ႔ ၿမိဳ႕ခံေတြက ေျပာပါတယ္။
Posted by Eagle info dash at 08:47 No comments:
After 2006 Burmese Naval Bases and Army Camps in ...
4.6 viss Golden Buddha Statue Found in Arakan's An...
ရခိုင်က ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် နေပြည်တော်မရွှေ့ရေး ဆန္ဒပြ...
ဖာ္ေတြေအဒီ ၈ ရာစုခန္႔က ေရႊအတိ ဆင္းတုေတာ္ ေျမာက္ဦး...